စွဲ၏ဆယ်ကျော်သက် neuroscience: ခေတ်သစ် (2015) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်
စွဲလမ်း၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှ neuroscience: တစ်ဦးကခေတ်သစ် (2015)
Volume ကို 16ဒီဇင်ဘာ 2015, စာမျက်နှာများ 192-193
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်: Developmental ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများ, ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့် longitudinal ရလဒျ
ဂျေး N. Giedd
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှည်လျားသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်အပြုအမူများတွင်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုနေတဲ့အချိန်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောမကြာသေးမီကပြုလုပ်အဖြစ်ကောင်းစွာဦးနှောက်ထဲမှာသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုအချိန်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းဖြစ်သည်။ neuroimaging နည်းပညာများတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်၏ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝြဖစ်စဉ်အသိပညာတိုးသုံးစွဲနိုင်ပြီ။
မကြာခဏမျိုးရိုးဗီဇနှင့်တဖြည်းဖြည်းခေတ်မီအမူအကျင့်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစီအမံတွေနဲ့ပေါင်းစပ်, ကျန်းမာရေးနှင့်နာမကျန်းအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့ရဲ့အနှစ်သာရကမှသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) ကို အသုံးပြု. အစပျိုး, အဘယ်ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုလိုက်လျောဖို့စတင်နေကြသည်အများအပြားအကြီးစားနှစ်ခုလုံးကိုအခွင့်အလမ်းများနှင့်အားနည်းချက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် ။
အာရုံကြောဆားကစ်တစ်ခုပီပီ embedded အဆင့်ဆင့်ပါဝင်သောလူထုကိုဦးနှောက်ဒေသများအကြားအဆိုပါတိုးမြှင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်, ဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်ရေး, နည်းလမ်းအဖုံဖုံနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးသရုပ်ပြနေသည်။ ရေရှည်အလားအလာလေ့လာရေးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအားကောင်း Synaptic ဆက်သွယ်မှု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖော်ပြသည်။ လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု (တဦးတည်းဧရိယာ၌ရာလှုပ်ရှားမှုအခြားအတွက်လှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့်ခန့်မှန်းရနိုင်ဖို့ဒီဂရီ) ၏ သာ. ကွီးမွတျကွက်တိဝင် EEG အသုံးပြု. လေ့လာမှုများအားဖြင့်ပြသထားပါသည်။ အလားတူပင်, သွေးအောက်ဆီဂျင်အကဲဖြတ် fMRI လေ့လာမှုများကိုလည်း Spatial ကွဲပြားဒေသများအကြားပူးတွဲ activation သာ. ကြီးဆီသို့အထွေထွေလမ်းကြောင်းသစ်ကိုပြ။ နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI လေ့လာမှုများအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုအမြန်နှုန်းအတွက် myelination နှင့် concomitant တိုးထင်ဟပ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအဖြူကိစ္စ volume ထဲမှာတိုးကိုရှာပါ။
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြသည်ဘယ်လိုစရိုက်လက္ခဏာတွေဂရပ်သီအိုရီ "node များ" နှင့်အကြားဆက်ဆံရေးများကိုတွက်ချက်ရန်အသုံးပြုကြောင်းသင်္ချာ၏ဌာနခွဲများ၏လျှောက်လွှာထဲကနေအလွန်တရာအကြိုးခံစားထားပါတယ် "အနား။ " ဆုံမှတ်များ Quark ထံမှနဂါးငွေ့တန်းအထိမည်သည့်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်တိုင်းတာ entity နိုင်ပါတယ် ။ ဦးနှောက် node များ၏နမူနာများ, ထိုကဲ့သို့သော hippocampus, ဒါမှမဟုတ်ထိုသို့သော prefrontal cortex အဖြစ်ဒေသအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဟာအာရုံခံဆဲလျဖြစ်နိုင်သည်။ အနားထိုကဲ့သို့သောဦးနှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကြွင်းသောအရာမှာသို့မဟုတ်ပေးထားသောသိမြင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်းအလားတူ activated ကြသောအခါကဲ့သို့သောအာရုံခံတစ်ခုသို့မဟုတ်စာရင်းအင်းဆက်စပ်မှုအကြားတစ်ဦး synapses အဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကနေ, node များအကြားမည်သည့်ဆက်သွယ်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဇယားသီအိုရီကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောဆားကစ်၏ရငျ့နှင့်မည်သို့ရင့်ကျက်အချိန်ကိုက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအပြုအမူများနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးအတွက်အပြောင်းအလဲဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြားဆက်ဆံရေးများကိုတွက်ချက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီချဉ်းကပ်။
ဥပမာ, သိသိသာသာအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကောင်းစွာတတိယဆယ်စုနှစ်သို့သိသိသာသာအပြောင်းအလဲများကိုခံယူဆက်လက်ထားတဲ့ prefrontal ဒေသများ, ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းခံယူထားတဲ့အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း limbic ဒေသများအကြားတစ်ဦးကိုပြောင်းလဲလက်ကျန်ငွေ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏စောင့်ကြည့်လေ့လာဖြစ်ရပ်များစွာကိုအခြေခံမှတွေးဆကြသည်Somerville et al ။ , 2010).
အများကြီးလုပျငနျးလေ့လာရေးအခြေခံမော်လီကျူးများနှင့်ဏုဖြစ်စဉ်များနားလည်ပြုခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်၏တိုးပွားလာအထူးပြုသွယ်ဝိုက်, ဒုတိယဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကိုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ မီးခိုးရောင်ကနေအဖြူဖို့ cortex ၏အတွင်းစိတ်နယ်စပ်မှာ MRI voxel ၏သတ်မှတ်ရေးလှန်ရသော myelination အတွက်တိုး, မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ရှိ "လျော့ချရေး" ၏အချို့သောအဘို့အကောင့်ပေမယ့်အကြား post ကိုရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုများနှင့်ဒေသတွင်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်မတိုက်ဆိုင်ထံမှသက်သေအထောက်အထားဆုံ မီးခိုးရောင်ဖြူကိစ္စ volumes ကို၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာသည်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်ကောင်းစွာပံ့ပိုးနေကြသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ synapses ၏ "တံစဉ်များကို" ဟုအဆိုပါမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချကိုအထောက်အကူပြုရန်သောအတိုင်းအတာမသိနိုင်ပါဘူး။ ဤသည်အထူးပြုနည်းပါးလာပေမယ့်ပိုမြန် / နူးညံဆက်သွယ်မှု၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းများက subserved သောကျော်ရိုးရှင်းသောအယူအဆအပေါ်အလင်းကိုသွန်းနိုင်ရန်အတွက်ဖြေရှင်းရန်အရေးပါသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်းအနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ကြားဝင်နှင့်သန့်စင်ယူဆချက်လမ်းပြဖို့အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအရှိဆုံးဒီကဗျာပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲမှုသူ့ဟာသူ၏ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အဓိကအင်္ဂါရပ်, ပတ်ဝန်းကျင်၏တောင်းဆိုချက်များကိုတုန့်ပြန်ပြောင်းဖို့ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကို plasticity ဖြစ်ပါတယ်။ plasticity အချို့သည်ဒီဂရီဘဝတစ်လျှောက်လုံးထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့် axon ပေါက်နှင့်အသစ် synapses (များ၏ဖန်တီးမှုတားစီးကြောင်းထိုကဲ့သို့သော Nogo-A, MAG နှင့် OMgp အဖြစ် myelin ထုတ်ပရိုတိန်းအဖြစ် plasticity လျော့ကျလာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ gradient ကိုလည်းမရှိfields, 2008) ။ သို့သော်လူသားများကျွန်တော်တို့ကိုအခြေအနေများ၏ကျယ်ပြန့မှသိသိသာသာချက်နဲ့ဖြစ်ခွင့်ပြုမြင့်မားသော plasticity တစ်ဦးထူးခြားရှည်လျားကာလရှိသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ plasticity မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးအဖြစ်စောင့်ရှောက်သူများအပေါ်အချိန်ကြာမြင့်စွာမှီခိုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ မှီခို၏တစ်ဦးကရှည်ကာလပိုမိုရှုပ်ထွေးလူမှုရေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဦးနှောက်အထူးပြု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ "ပွင့်လင်း options များစောင့်ရှောက်ခြင်း" by လူသားများဟာသူတို့ရဲ့အထူးသဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏တောင်းဆိုချက်များကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်အကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။ လူသားတွေဟာအီကွေတာပေါ် balmy ကျွန်းများဖို့အအေးပိုင်းမြောက်နှင့်တောင်ထမ်းဘိုးထံမှနေရာတိုင်းရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာယဉ်ကျေးမှုအပြောင်းအလဲများမှအဆင်ပြေအောင်ပါပြီ။ တသောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အသုံးအနှုန်းများအတွက်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအကျဉ်းငွေပမာဏကိုကျနော်တို့အစားအစာနှင့်အမိုးအကာလုံခြုံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့။ အခုတော့အရှိဆုံးလူသားမြားသဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုများသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအချက်များကနေတဆင့်အစောပိုင်းကအပျိုဖော်ဝင်နှင့်ပိုမိုအရွယ်အစားနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအရာ, ဝေးလျော့နည်းအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူအမိုးအကာနှင့်ကယ်လိုရီ secure နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအစားအစားအစာလုံခြုံမှုကိုများစွာသောယခုစကားများသို့မဟုတ်သင်္ကေတများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေရဲ့အများစုကိုဖြုန်းနေကြတယ်။ ဒါဟာစာဖတ်ခြင်းသာ 5000 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလူ့သမိုငျးအများကြီးဘို့မတည်ရှိခဲ့ပေးထားထူးဆန်းသောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ plasticity ၏အားသာချက်များအတွက်ထပ်မံထောက်ခံမှု 500,000 နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုဦးနှောက်အရွယ်အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးတိုးလွန်ခဲ့တဲ့ရာသီဥတု၏ကွမျးတမျးပေမယ့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ဒီဂရီနှင့်အတူမဆက်နွယ်နေပါသည်သောလေ့လာရေးအနေဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည် Neanderthals ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးကပ်မျိုးရိုးဗီဇဆွေမျိုးသားချင်းမတူဘဲ၌တည်ရှိ၏။ ရင့်ကျက်မှုနှုန်းသစ်ပင်ကွင်းသစ်ပင်များများအတွက်ကြီးထွားနှုန်းပိုင်းခြားသိမြင်ရန်အသုံးပြုနိုင်အများကြီးအတူတူပင်လမ်းအတွက်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအံသွားရာမှအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း Neanderthal သွားများအနေဖြင့်အထောက်အထား (သူတို့တစ်တွေအများကြီးပိုပြီးလျင်မြန်စွာရငျ့ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြRamirez Rozzi နှင့် Bermude နှင့် De ကက်စထရို, 2004) ။ အဲဒီမှာဦးနှောက် 10% အကြောင်းကိုပိုမိုကြီးမားခဲ့ကြသူတို့ကကြမ်းတမ်း enviroments မှာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ပေမယ့်, သူတို့ရဲ့ tool ကိုအသုံးပြုမှုကို 100,000 နှစ်အတွင်းမပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကလူသား၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေး plasticity နှင့်အလိုက်အထိုက်နေတတ်မရှိခဲ့ပေ။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် plasticity သို့သော်ကစျေးနှုန်းမှာလာ, ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစိတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားနည်းချက်အဖြစ်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးလျက်ရှိသည်။ အားလုံးစိတ်ရောဂါ၏ထက်ဝက်ကျော်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာ။ ငါးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်တစ်ခုမှာလူကြီးသို့ဆက်လက်ရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့စိတ်ရောဂါရှိပါတယ်။ ဒါဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်၏ပေါ်ပေါက်ရေး, စိတ်ကြွရောဂါ, စိတ်ကျရောဂါ, မမှန်စားနဲ့ရူးများအတွက်အထွတ်အထိပ်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုစတင်ခြင်းများအတွက်အသုံးအများဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားလုပ်၏ neurobiology ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပေါ်ကိုလယ်အစီရင်ခံစာတွင် Developmental သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများ၏ဤအထူး Edition ကိုပါ။ ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်အတွက်အပြောင်းအလဲချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း circuitry ဆက်နွယ်နေကြောင်းအဖြစ်တသမတ်တည်း themes များအသုံးပြုမှုကိုစတင်ခြင်း, ပမာဏနှင့်အမျိုးအစားအကြားဆက်ဆံရေးဖြစ်ကြသည်။ လေ့လာမှုနေ့စွဲဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသော်လည်း, သိသိသာသာစိန်ခေါ်မှုများသက်ရောက်မှုကိုအကြောင်းမရှိ / effect ကိုဒိုင်းနမစ်နှင့်ယန္တရားများ၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ရန်အတွက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
လမ်းကြောင်းအဖြစ်, ယန္တရားများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပိုပြီးအရင်းအမြစ်တွေကို elucidated လျက်ရှိသည်နှင့်ပိုပြီးသုတေသီများလယ်သို့ရေးဆွဲလျက်ရှိသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ပို. ပို. မဟုတ်ဘဲကိုယ့်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးအကြားတစ်ဦးအလယ်အလတ်အဆင့်ကအဖြစ်ထက်ကွဲပြားဇီဝဗေဒနှင့်အတူတစ်ဦးကွဲပြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအထူးထုတ်ဝေဆယ်ကျော်သက် neurobiology နှင့်စွဲအကြား Interface ကိုရှာဖွေစူးစမ်းဟာထင်ရှားတဲ့သုတေသီအများအပြားကနေ seminal တွေ့ရှိချက်များပါဝင်သည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်စိတ်ရောဂါအများစုအတွက်အစပြုခြင်း၊ အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးအကျိုးဆက်များရှိသည့်အဓိကဘဝရွေးချယ်မှုများနှင့် ဦး နှောက်၏ပလပ်စတစ်မှုတို့ကကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်အချိန်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်သုတေသနအတွက်ရန်ပုံငွေသည်မကြာသေးမီအချိန်အထိဘတ်ဂျက်၏အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု၏ရေတိုနှင့်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်လိမ့်မည်ဟုအမျိုးသားရေး longitudinal ပဏာမခြေလှမ်း - ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်သိမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (ABCD) လေ့လာမှုနှင့်အတူဒီပြောင်းလဲသွားတယ် စီမံကိန်းသည်လူငယ်၊ ၁၀,၀၀၀ ခန့်ကိုအရက်၊ ဆေးခြောက်၊ ဆေးရွက်ကြီးနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမသုံးမီစုဆောင်းပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်စော။ လူကြီးဖြစ်လာသည်။ ABCD စီမံကိန်းသည်လူငယ်များသို့မဟုတ်ထူထောင်ထားသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအတွက်ဆယ်ကျော်သက် neurobiology ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိစေရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလိုအပ်သောထောက်ပံ့မှုနှင့်စွမ်းရည်များကိုလယ်ကွင်းသို့သယ်ဆောင်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။
သင်ယူမှု, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်အတွက် White ကကိစ္စ
ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ , 31 (7) (2008), p ။ 361
PDF ဖိုင် (844 K)
Ramirez Rozzi နှင့် Bermude နှင့် De ကက်စထရို, 2004
FV Ramirez Rozzi, JM Bermude နှင့် De ကက်စထရို
သဘာဝတရား, 428 (ဧပြီလ (6986)) (2004), စစ။ 936-939
Somerville et al ။ , 2010
LH Somerville, RM ဂျုံးစ်, BJ Casey
ပြောင်းလဲမှု၏တစ်ဦးကအချိန်: အစာစားချင်စိတ်မှဆယ်ကျော်သက် sensitivity ကို၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောဆက်စပ်နှင့်ဆန္ဒရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကို
ဦးနှောက် Cogn ။ , 72 (2010), စစ။ 124-133 http://dx.doi.org/10.1016/j.bandc.2009.07.003
PDF ဖိုင် (319 K)
Elsevier, Ltd. ထုတ်ဝေသည်မူပိုင်ခွင့်© 2015